Ukucwaningwa kwamabhuku kuqediwe kuwo wonke ama-patches athunyelwe yi-University of Minnesota | Kusuka kuLinux
Ukucwaningwa kwamabhuku kuqediwe kuwo wonke ama-patches athunyelwe yi-University of Minnesota
Umkhandlu wezobuchwepheshe we ILinux Foundation isanda kukhipha umbiko ohlanganisiwe ngalesi sigameko ehlobene nabaphenyi kusuka eNyuvesi yaseMinnesota okwaba yihlazo impela, ngoba bazama ukwethula ama-patches ku-kernel aqukethe amaphutha afihliwe aholela ekubeni sengozini.
Abathuthukisi be-kernel baqinisekise imininingwane eshicilelwe phambilini, kuma-patches ama-5 abelungiselelwe ngesikhathi sophenyo lwe- «Hypocrite Commits», ama-patches ama-4 anokukhubazeka alahlwa ngokushesha futhi ngokuzikhandla kwabanakekeli futhi awangenanga endaweni yokugcina izinhlamvu.
Futhi, Ukuhlaziywa okungu-435 kwahlaziywa, kufaka phakathi ukulungiswa okulethwe ngonjiniyela abavela eNyuvesi yaseMinnesota futhi akuhlobene nokuhlolwa kokukhuthaza ukuba sengozini okufihliwe.
Ngo-Ephreli 20, 2021, kunikezwe umbono wokuthi iqembu le- Abaphenyi base-University of Minnesota (UMN) base beqale kabusha ukuthumela ikhodi ebeka ukhiye we-Linux kernel.
UGreg Kroah-Hartman ucele umphakathi ukuthi uyeke ukwamukela iziqeshana ezivela ku-UMN futhi waqala i- ukubuyekezwa okusha kwakho konke okuthunyelwe ngaphambili kweYunivesithi.
Lo mbiko ufingqa izehlakalo eziholele kuleli phuzu, ukubuyekezwa kanyeidokhumende le- "Hypocrite Commits" ebelihanjisiwe ukuze lishicilelwe, futhi ibuyekeza yonke i-kernel yangaphambilini eyaziwayo evela kubalobi be-UMN yamukelwe endaweni yethu yokugcina. Phetha ngezinye iziphakamiso zokuthi umphakathi, kufaka phakathi i-UMN, ungahamba kanjani
phambili. Abanikeli balo mbhalo bahlanganisa amalungu e-Linux
ITechnical Advisory Board (TAB) yeSisekelo, ngosizo lokubuyekezwa kwesichibi se
amanye amalungu amaningi omphakathi wonjiniyela we-Linux kernel.
Futhi yilokho kusukela ngo-2018, iqembu labaphenyi abavela eNyuvesi yaseMinnesota belisebenza kakhulu ekulungiseni amaphutha. Ukubuyekezwa okusha akuvezanga noma yimuphi umsebenzi onobungozi kulezi zivumelwano, kepha kuveze amaphutha athile kanye nokushiyeka okungahlosiwe.
Futhi Ukuqinisekiswa okungu-349 kubikwe njengokuqondile futhi kungashintshiwe. Kokwenza okungu-39, kutholakale izinkinga ezidinga ukulungiswa; lokhu kukhishwa kukhanseliwe futhi kuzothathelwa indawo ukulungiswa okulungile ngaphambi kokukhishwa kwe-kernel 5.13.
Amaphutha ku- Ukwenza okungu-25 kulungiswe kuzinguquko ezalandela futhi ukwenza okungu-12 kwalahlekelwa ukubaluleka kwawo, ngoba zithinte amasistimu wefa asesusiwe kakade ku-kernel. Esinye seziqinisekiso ezifanele sikhanseliwe ngesicelo sombhali. Ukuqinisekiswa okuyisishiyagalolunye okuthunyelwe kwathunyelwa kusuka kumakheli ka- @ umn.edu kudala ngaphambi kokwakhiwa kwethimba locwaningo elihlaziyiweyo.
Ukubuyisa ukuzethemba eqenjini leYunivesithi yaseMinnesota nokuthola kabusha ithuba lokubamba iqhaza ekuthuthukiseni i-kernel, iLinux Foundation iphakamise izidingo eziningi, eziningi zazo esezihlangatsheziwe.
Ukukhuthalela okufanele kudinge ukuhlolwa ukuze kutholakale ukuthi ibaphi ababhali ababambe iqhaza kumaphrojekthi ahlukile ocwaningo we-UMN, khomba inhloso yanoma iyiphi patch futhi ususe amabala angalungile kungakhathalekile inhloso. Lokhu kuhlose ukuvuselela kabusha lUkuthembela komphakathi emaqenjini ocwaningo nakho kubalulekile, ngoba nakhoLesi sehlakalo singaba nomthelela omkhulu ekuthembeni kubo bobabili amakheli angapholisa ukubamba iqhaza kwanoma yimuphi umcwaningi ku-kernel naku- asathuthuka.
Isibonelo, abacwaningi sebevele bahoxisile ukushicilelwa kwe- "Hypocrite Commits" futhi bakhansele inkulumo yabo e-IEEE Symposium, ngaphezu kokudalula esidlangalaleni ukulandelana kwezikhathi kwemicimbi nokunikeza imininingwane yezinguquko ezilethwe ngesikhathi kufundwa.
Kufanele ukhumbule lokho UGreg Kroah-Hartman, obhekene nokugcina igatsha elizinzile le-Linux kernel liqaphele umcimbi futhi lawuthatha isinqumo sokwenqaba noma yiziphi izinguquko ezisuka eNyuvesi yaseMinnesota ziye kernel yeLinux, bese ubuyisela wonke amachashazi amukelwe ngaphambilini bese uwahlola kabusha.
Isizathu sokuvinjelwa kwakuyimisebenzi yeqembu locwaningo efunda ukuthi kungenzeka yini ukuthi kukhuthazwe ubungozi obufihliwe kukhodi yamaphrojekthi womthombo ovulekile, ngoba leli qembu lithumele amabala afaka amaphutha ezinhlobo ezahlukahlukene.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ukucwaningwa kwamabhuku kuqediwe kuwo wonke ama-patches athunyelwe yi-University of Minnesota
I-Bauh: Imenenja yephakheji yokuqhafaza yezinhlelo zokusebenza eziningi ze-Linux